Topnepalnews.com | महायज्ञको छैटौं दिन: दिल खोलेर दान गर्नेको ओइरो,कति भयो संकलन?
महायज्ञको छैटौं दिन: दिल खोलेर दान गर्नेको ओइरो,कति भयो संकलन?
Posted on: December 19, 2016 | views: 627
पप्पु गुरुङ्ग, दोेधारा चाँदनी,पुस ४ । भानु बहुमुखी क्याम्पस दोधारा चाँदनीले संचालन गरेको धनधान्य महायज्ञको हिजो छटौ दिनमा भक्तजनहरुले दिल खोलेर दान दिए । आफ्नो बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागी शिक्षा क्षेत्रमा दान दिएको सबै दाताहरुले बताएका छन् । दोधारा चाँदनीको एक मात्र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सबैले आफुले सक्दो दान दिएको दाताहरुले बताएका छन् ।
दाताहरुको दान दिन दिनै बढ्दै गएको आयोजक महायज्ञ मुल आयोजक समितिले जनाएको छ् । दोधारा चाँदनी नपा ५ बस्ने तथा पुर्व–माननिय ईन्द्र बहादुर खत्रीले आफु र आफ्ना २ वटा श्रीमती सुमित्रा र नन्दा देबी खत्रीको नाउमा १ कट्टा भुमी भानुको अक्षय कोषको लागी दान गर्नुभएको छ् ।
उक्त जग्गाको मुल्य रु. १५ लाख १ हजार १ सय ११ रुपिँया आंकलन गरिएको छ् । यस्तै दोधारा चाँदनी नपा ६ निवासी नारायण दत्त भट्टले पनि १ कट्टा जग्गा दान गर्नुभएको छ् । जस्को मुल्य रु. २ लाख १ हजार १ सय ११ रुपिँया आंकलन गरिएको छ् । नगद दानाबाट रु. १ लाख ५३ हजार ३ सय ६ रुपिँया, कलशबाट रु. ५७ हजार २ सय, बचन दानबाट रु. ४ लाख २ हजार ६ सय ९९ रुपिया गरि आजको जम्मा रकम रु. २३ लाख १५ हजार ३ सय ८७ रुपिँया र १० कुन्टल धान दान प्राप्त भएको सचिवालयका प्रवक्ता गगन खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ् ।
महायज्ञमा आज सम्म भुमी दान सहित रु. ६३ लाख ५६ हजार २ सय ४० रुपि“या र ४३ कुन्टल धान बराबरको दान प्राप्त भएको छ् । छटौ दिनमा सबै दाताहरुलाई सम्मान समेत गरिएको महायज्ञ मुल आयोजक समितिका सल्लाहकार संयोजक बेल बहादुर रानाले जानकारी दिनुभएको छ । महायज्ञका भजन टोलीले आज कृतन समेत प्रस्तुत भएको थियो ।
महायज्ञमा प्रत्यक दिन योगा बिहान ७ बजे देखी मूल पाठ पारायणबाट दैनिकी प्रवचन एवं भजन कृतन सुरु र हवन, १० बजे भजन कृतन, ११ बजे कथा वाचन एवं दान दाता सम्मान, २ बजे प्रवचन एवं झाँकी तथा लिला कार्यक्रम हुने महायय मूल आयोजक समितिका महासचिव गगन खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै बेलुकी ७ बजे देखी साढे ९ बजे सम्म प्रवचन एवं भजन कृतन कार्यक्रम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । महायज्ञको धार्मीक कार्यमा सहभागी हुन आयोजकले सबैमा आग्रह गरेको छ ।